'अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ गणना भएकै छैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ गणना भएकै छैन'
काठमाडौँ — अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ गणना नै अहिलेसम्म नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ । भरपर्दो तथ्यांकको अभावले प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसक्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरू राज्यबाट पाउने सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति र परिवार सामाजिक तिरस्कार खेप्नुपर्ने डरले यथार्थ परिचय दिन हिच्किचाउँदा वास्तविक तथ्यांक नआएको अपांगता भएका व्यक्तिका अगुवाको दाबी छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ३ सय २९ छ, जुन कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत मात्रै हो ।
यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको (कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत) भन्दा निकै कम देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसमा २० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् ।
बौद्धिक अपांगताको सवालमा परिवारले नै खुलाउन नचाहने समस्या छ । यसले गर्दा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य–सुविधाको पहुँचबाट वञ्चित हुन्छन् । जनगणना–२०६८ उनीहरूको संख्या १४ हजार ८ सय ८८ मात्रै छ ।
बौद्धिक अपांगता अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेत परिवारले वास्तविक विवरण दिन नचाहे ‘कन्भिन्स’ गराएर गणना लिन सरकारले हरेक गणकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अघिल्ला जनगणनामा भएका कमीकमजोरीको सिकाइले यसपल्ट संवेदनशील बनाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले बताए । ‘अपांगताको जेजस्तो अवस्था हो यकिन तथ्यांक ल्याउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने । उनले यसपालिको जनगणनामा सुस्त श्रवण र न्यून दृष्टिसहित १२ वटा समूह छुट्ट्याएर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गणना गर्न लागिएको जानकारी गराए ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अपांगतालाई शारीरिक अपांगता, बहिरा, दृष्टिविहीन, बहिरोपन, स्वर/बोलाइसम्बन्धी अपांगता, मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अटिजम, हेमोफोलिया, बहुअपांगता गरेर १० प्रकारमा बाँडिएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ ०७:४९
सूर्य उपासनाको पर्व
पहाडी भूभागमा पनि मनाउन थालिएको छठ पर्व राष्ट्रिय एकताको सेतु बनिरहेको छ ।
कार्तिक २४, २०७८ रामनारायण देव
छठ पर्वको उत्पत्ति कुन कालमा भयो भन्ने कुनै ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध छैन । शास्त्राचारअन्तर्गत प्रत्यक्ष देवता सूर्यको पूजा र उपासना वैदिक कालदेखि नै आइरहेकाले लोकाचारअन्तर्गत यस पर्वलाई महोत्सवका रूपमा मनाइने चलन बसेको मान्न सकिन्छ ।
यो षष्ठी तिथिमा पर्छ, जुन अपभ्रंश भई ‘छ’ भएको हो । सूर्यसँग षष्ठी तिथिको सम्बन्धको चर्चा ब्रह्मवैवर्त पुराणमा पाइन्छ, जसअनुसार प्रकृतिदेवीले आफूलाई पाँच भागमा विभाजित गरिन् ! दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती र सावित्रीमा ।
मार्कण्डेय पुराणमा भनिएको छ— ‘स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।’ प्रकृतिदेवीको एउटा प्रधान अंशलाई देव सेना भनिएको छ जसलाई श्रेष्ठ मातृका मानिएको छ, जसलाई समस्त शिशुको रक्षिका देवी ठानिन्छ । प्रकृतिको छैटौं अंश भएका कारण षष्ठी भनिएको छ । शिशु–रक्षिका भएकाले यी देवीको विशेष रूपमा पूजा गरिन्छ । यो बच्चा जन्मेको छैटौं दिन वा शुक्लपक्षको षष्ठी तिथिमा पर्छ । मिथिलामा यी देवीको नाम ब्रह्मवैवर्त पुराणको प्रकृति खण्डमा कात्यायनी भनिएको छ ।
षष्ठी देवीको पूजा कुन समयमा सुरु भयो र सूर्य षष्ठी नामक पर्व कसरी प्रख्यात भयो भन्ने विषय विचारणीय छ । भविष्य पुराण र ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यी देवीको पूजाबारे चर्चा गरिएको छ । मैथिली महाकवि विद्यापतिकृत वर्षकृतमा प्रतिहार षष्ठीका रूपमा षष्ठीको चर्चा गरिएको छ । यस प्रकार छठ पर्वलाई छठी माता, सूर्य षष्ठी र प्रतिहार षष्ठी पनि भनिन्छ । यी सबै नाममा षष्ठी तिथिको उल्लेख भए पनि षष्ठी तिथि मुख्य नभई षष्ठीपछि सप्तमी अर्थात् षष्ठीयुक्त सप्तमी तिथि प्रधान छ । यसलाई प्रतिहार षष्ठी पनि भनिन्छ । षष्ठीका दिन साँझमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ भने भोलिपल्ट सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई ।
सूर्य शब्दको अर्थ सर्वप्रेरक हो । वैदिक ग्रन्थहरूमा ‘तमः आसित्’ भनिएको पाइन्छ । अर्थात्, सृष्टिको उत्पत्ति हुनुअघि सर्वत्र अन्धकार थियो । हिरण्यको गर्भबाट एउटा दिव्य तेज गोलाकार रूपमा प्रकट भयो । दिगन्तव्यापी त्यो तेजका कारण सम्पूर्ण दिशाको अन्धकार नष्ट भयो ।
साम्व पुराणअनुसार, सूर्य तेजको प्रकाश र अग्निका उष्माको परस्पर संयोगबाट सूर्य रश्मिको उत्पत्ति हुन्छ । सूर्यका हजारौं रश्मि छन् । यिनैलाई वैज्ञानिकहरूले सात रंग (रातो, हरियो, नीलो, पहेंलो, सुन्तला, आकाशे र खैरो) मा बाँडेका छन् । यी रंगहरूको आ–आफ्ना विशेषता छन् । स्वामी माधवानन्दका अनुसार, सूर्यको प्रथम किरण आसुरी सम्पत्तिमूलक, आध्यात्मिक उन्नतिको प्रेरक हो । भौगोलिक स्थितिका कारण सूर्यका सातौं किरणले गंगा र यमुनाको मध्यभागमा अत्यधिक समयसम्म उष्णता प्रदान गर्ने भएकाले नै यिनलाई अन्तर्वेदी भनिएको हो । यस भू–खण्डलाई अति पवित्र र धार्मिक मानिन्छ । यस भूभागमा आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान र पूजाहरू बढी हुने गर्छन् । षष्ठी (छठी) छठ पर्वको उद्गमस्थल पनि यस क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्वचा (छाला) सम्बन्धी रोगको उपचार सातै रंगबाट हुन्छ । तसर्थ आधुनिक चिकित्सामा पनि सूर्यस्नानको महत्त्व बढ्दै गएको छ ।
प्राचीनकालमा ऋषिहरूले नग्न आँखाबाट सूर्यको दर्शन गरेर त्यसको आध्यात्मिक स्वरूपको मात्र वर्णन गरे । यसको प्रमुख कारण वैज्ञानिक उपकरणको अभाव थियो । सूर्यसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन पहिलोपटक इसापूर्व ७४७ मा बेबिलोन निवासीले गरे । सूर्यलाई वैदिक देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त छ । तसर्थ हिन्दु चिन्तनधारामा सूर्य उपासना गरेर मात्र शुभकार्यको अधिकारी हुन्छन् भनिएको छ । प्राचीनकालदेखि नै मानव मस्तिष्कलाई सूर्यले जति प्रभावित गरेको छ, त्यति कुनै प्रकृतिका तत्त्वले गरेको छैन । विश्वका सबै धर्मस्थलमा प्रकाशलाई ईश्वरको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै सूर्य पूजाको चलन विभिन्न देशमा पाइन्छ । मेसोपोटामियाको सभ्यतामा सूर्यलाई समस भनेर पूजा गर्ने चलन छ । युनानी तथा सिन्धुघाटीको सभ्यता तथा जापानको तेरिकयो सम्प्रदायमा सूर्यपूजा प्रचलित थियो ।
कात्तिक शुक्ल र चैत्र शुक्ल षष्ठी र सप्तमी तिथि अर्थात् वर्षमा दुईपटक मनाइने छठ पर्वको सुरुवात चतुर्थी तिथिदेखि नै हुन्छ । यस दिन सात्त्विक भोजन गर्ने गरिन्छ । पञ्चमीका दिन षष्ठी मातालाई अर्वा, अन्न, दूध, घ्यू, तुलसी, फलफूल चढाउने गरिन्छ, जसलाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गरिन्छ ।
यस दिन राति जल पिउनसमेत निषेध गरिएको छ । षष्ठी तिथिका दिनलाई सन्ध्या अर्घ्य भनिन्छ । बिहानदेखि नै सामान्यतः महिलाहरू भोग सामग्री (जस्तो— ठकुआ, पडुकिया, सेल, मिष्ठान्न) सहित ताल, पोखरी वा नदीको घाटमा जान्छन् । अघिल्लो दिनदेखि नै घाट लिपपोत गरी सजाइन्छ । व्रतालु जलमा प्रवेश गरी अस्ताउँदो सूर्यलाई डालोमा सामग्री राखी अर्पण गर्छन् । राति त्यही घाटमा जाग्राम बसी भोलिपल्ट पूजासामग्री घाटमा फिँजाएर राखिन्छ र सूर्योदयपछि जलमा प्रवेश गरी पुनः अर्घ्य दिइन्छ ।
आन दिन उगलौ भोट भिनसखा
आई किए भेल एते छेर ?
बाट भोटिगेल अन्हरा पुरुष, नयन देत ऐत देर
बाट भेटिल गेल कोठीया, काया दैत एते देर
यसरी व्रतालु महिलाहरूले मैथिली भाषामा मीठो गीत गाएर सूर्य भगवान्को आराधना गर्छिन् । छठ पर्वमा महिलाको सहभागिता बढी हुन्छ । व्रत बस्नेदेखि पूजा सामग्रीहरू तयार गर्नसम्ममा महिलाकै योगदान हुन्छ । छठ पर्व सामाजिक एकता र सद्भावले ओतप्रोत भएको हुन्छ । समाजका समस्त जातिले मनाउने पर्व हो । एउटै जलाशयमा एउटै घाटमा सबै जाति र समुदायले मनाउनु सामाजिक सौहार्दको प्रतीक हो । पहिले–पहिले मिथिलाञ्चलमा मात्र मनाइने यो पर्व प्रायः देशभरि, काठमाडौं उपत्यकादेखि पहाडी भू–भागमा पनि मनाउन लागिएको छ । छठ पर्व राष्ट्रिय एकताको सेतु बनिरहेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ ०७:४८